Salaamanews » Wafdi ay hogaamineyso wasiiradda arrimaha dibadda oo ku soo laabtay Muqdisho
Home » Warar Wafdi ay hogaamineyso wasiiradda arrimaha dibadda oo ku soo laabtay Muqdisho Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 12th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Ra’isal wasaare Shirdoon oo Muqdisho kula kulmay madax ka socday TalyaanigaDaawo: Hadii aad Shiinaha joogtid way adagtahay in carruurtaada aad iskuulka u dirto (dhacdo la yaab leh)Hay’adaha gargaarka oo shaqooyinkooda dib uga bilaabay Kismaayo, balse caqabado ayaa wali jiraMadaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaDowladda Yemen oo dib u soo celineyso maraakiibta Soomaaliya
(Salaamanews)-Raisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo wafdi ay hoggaamineyso ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho.
Marwo Fowsiyo ayaa faahfaahin ka bixisay safarro ay ku tagtay dalalka Britain iyo Talyaaniga, iyadoo sheegtay inay mas’uuliyiinta dowladda Ingiriiska kala hadashay xoojinta xiririirka ka dhaxeeya labada dal.
Marwada ayaa sidoo kale sheegtay inay madaxda wadamadaasi kala hadashay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha ammaanka iyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta Talyaaniga ayay sheegtay inay kala hadashay adkaynta xiriirka labada dal, dib u soo nooleynta iskaashigii u dhaxeeyay labada dal ee la xiriiray mashaariicda horumarinta sida kalluumeysiga, beeraha iyo tababarka ciidanka, kuwaasoo istaagay muddadii ka dambeysay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Waxay sheegtay inay magaalada Rome kula kulantay mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda cuntada adduunka (WFP) oo ay kala hadashay sidii ay dowladda uga taageeri lahayd qaxootiga dib ugu laabanaya dalka.
Booqashada ra’isal wasaare xigeenka ahna wasiirradda arrimaha dibadda Marwo Fowsiyo ayaa noqotay midi ugu horreysay oo dalalka Britain iyo Talyaaniga uu ku tagay masuul ka socda Soomaaliya tan iyo markii la dhisay dowladda cusub ee Soomaaliya.
Tags: warar « Qoraalkii HoreQaraxyo amaanka saameeyay oo ka dhacay Muqdisho	Qoraalka Xiga »Warar dheeraad ah oo ka soo baxay weerarkii Buula-Mareer	Halkan Hoose ku Jawaab